आकाशमा नक्षत्रहरू: उनीहरूको बारेमा सिक्नुहोस् नेटवर्क मौसम विज्ञान
रातको आकाशमा ताराहरू एक अनियमित तरीकाले व्यवस्थित गरियो। केहि ठुलो देखिन्छ र केहि विभिन्न कारणका लागि सानो देखिन्छन्। एउटा तारा आफैंको आकार हो र अर्को त्यो तारा र हाम्रो ग्रह बीचको दूरी हो। के सोचेको छ कि त्यहाँ काल्पनिक रेखाहरू छन् जुन ताराहरू र हामी एक लाई मिल्ने गर्दछ नक्षत्र। नक्षत्रहरूको एक अर्थ छ र इतिहासमा उपयोगी छ। यहाँ हामी तपाईंलाई नक्षत्रहरूको बारेमा बढी बताउन जाँदैछौं र सब भन्दा महत्त्वपूर्णलाई नाम दिनुहोस्।
के तपाइँ खगोल विज्ञानको बारेमा तपाइँको ज्ञान बढाउन र नक्षत्रहरूको बारेमा बढी जान्न चाहानुहुन्छ? यहाँ हामी तपाईंलाई भन्छौं।
1 रातको आकाशमा नक्षत्र
3 आज तारामंडलहरू
4 केहि बढि महत्त्वपूर्ण नक्षत्रहरू
4.1 ठूलो भालु
4.2 सानो भालु
रातको आकाशमा नक्षत्र
नक्षत्रहरू ताराहरूको समूह भन्दा बाहेक अरू केही हुँदैन जुन, पूर्ण रूपले काल्पनिक फारम, ती लाइनका युनियनहरूबाट रूप लिन्छन्। यो मानौं हामी यसको आकारमा थोप्लाहरू सामेल हुन्छौं। यी नक्षत्रहरूको नाम पौराणिक जीवहरू, पशुहरू, मानिसहरू जसले मानवताका लागि महत्वपूर्ण कामहरू गरेका छन् वा महत्वपूर्ण वस्तुहरूबाट आउँदछन्।
तिनीहरू मार्फत नाम राखिएका छन् ल्याटिन, ग्रीक र अरबीबाट परम्परागत उचित नामहरू। यस नाममा सामान्यतया सानो अक्षरको ग्रीस अक्षर हुन्छ जुन अल्फाको साथ शुरु हुन्छ र बाँकी वर्णमालाहरू अवरोही क्रममा। यस तरीकाले तपाई यसलाई नामको पढाइको एक बिट खोजको क्रम दिनुहुन्छ। ग्रीक वर्णमालाको पछाडि हामी नक्षत्रको नामको संक्षेप पाउँछौं।
यदि हामीले नक्षत्रहरूको गणनाको लागि ग्रीक अक्षरहरू निकाल्छौं भने हामी ल्याटिन अक्षरहरू प्रयोग गर्दछौं। यस प्रकारको नामकरण यसलाई बायरको रूपमा चिनिन्छ। साना साना ताराहरू नामबाट बनेका हुन्छन् र त्यसपछि संक्षिप्त नाम फ्लामस्टीड भनिन्छ। धेरै नामकरणहरू छन्, एक तारा को दुनिया भर मा फरक नाम हुन सक्छ।
न केवल हामी एउटै ताराहरू बिभिन्न नामका साथ पाउन सक्दछौं, तर नक्षत्रहरू बनाउने ताराहरूको समूह पनि बिभिन्न कहलाइन्छ।
प्राचीन समयमा नक्षत्रहरू थिए रातमा नेभिगेट गर्न सिक्न महान उपयोगिता। जीपीएस नेभिगेसन वा कुनै पनि प्रकारको राडारहरू बिना, समुद्र पार नेभिगेशन अन्य प्रकारको "टेक्नोलोजीहरू" को अधीनमा थियो। यस केसमा, नक्षत्रहरूले उनीहरूको अभिमुखिकरण स indicate्केत गर्न सन्दर्भको रूपमा काम गर्थे।
तिनीहरूले पनि स्टेशनहरु को पारित को लागी खाता मा सक्षम हुन सेवा गरे। मौसम बाहेक, स्टेसनहरू राम्रोसँग परिभाषित छैनन्। यस कारणले, नक्षत्रहरूको आन्दोलनको साथ पृथ्वीको सूर्यको सम्बन्धमा पृथ्वीको स्थानको अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न सम्भव थियो सौर्य प्रणाली र जान्नुहोस् उनीहरू कुन वर्षको मौसम हो।
हाल, नक्षत्रहरूको एक मात्र प्रयोग हो अधिक सजीलो ताराहरूको स्थिति याद गर्न। हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि हामीले आकाशमा लाखौं ताराहरू देख्न सक्छौं र यो, मिनेट र घण्टा जति बित्दै जान्छ, ती पृथ्वीको परिक्रमणको गतिले गर्दा सर्दछन्।
कुलमा हामीले हाम्रो आकाशीय क्षेत्रमा ताराहरूको 88 4.000 समूहहरू भेट्टायौं। तिनीहरू सबैले नामको साथ भिन्न आकृति लिन्छन्, यो धार्मिक वा पौराणिक हो। सब भन्दा पुरानो नक्षत्र रेखाचित्र ईसापूर्व ,XNUMX००० भन्दा अगाडि मिति दिइन्छ। त्यस समयमा सुमेरियनहरूले कुम्भ राशि जस्ता महत्वपूर्ण नक्षत्रहरूलाई आफ्नो देवताको सम्मानमा नाम दिए।
नक्षत्रहरू जुन आज उत्तरी गोलार्धमा "काम" गरिरहेछन् ती पुरानो मिश्रीहरूले कल्पना गरेका भन्दा धेरै फरक छैन। केहि महत्त्वपूर्ण नक्षत्रहरू होमर र हेसियोदको थिए। टोलेमी एक गणितज्ञ र खगोलविद् थिए र आज हामीसँग रहेको tel 48 नक्षत्रहरूको पहिचान गर्न सक्षम थिए। उनले पत्ता लगाएका ती cons 48 नक्षत्रहरू मध्ये 47 XNUMX अझै पनि उस्तै नामहरू छन्।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण र ज्ञात मध्ये ती हुन् जुन पृथ्वीको कक्षाको विमानमा छन्। ती राशि चक्रका नक्षत्रहरू हुन्। तिनीहरू प्रत्येक व्यक्तिको राशि चिन्हसँग सम्बन्धित छन्। यो वर्षभरि प्रत्येकको जन्म महिनाको साथ गर्न छ।
त्यहाँ अरूहरू पनि छन् जुन बिग डिपरको रूपमा चिनिन्छ जुन उत्तरी गोलार्ध र हाइड्राबाट देख्न सकिन्छ। पछिल्लो सब भन्दा ठूलो तारामंडलहरू मध्ये एक हो जुन हाम्रो आकाशीय भल्टमा अवस्थित छ। यो stars 68 ताराको समूह हो जुन ना naked्गो आँखाले देख्न सकिन्छ। एकदम विपरित क्रुज डेल सुर हो, जुन सब भन्दा सानो अवस्थित आकारको नक्षत्र हो।
केहि बढि महत्त्वपूर्ण नक्षत्रहरू
कन्स्टेलेसनहरू हामी कहाँ छौं गोलार्धमा निर्भर गर्दै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणको लागि, उत्तरी गोलार्धमा, बिग डिपर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तारामंडलहरू मध्ये एक हो। यद्यपि दक्षिणी गोलार्द्धमा होईन। यो किनभने यो त्यहाँ देखिने छैन, त्यसैले यो प्रासंगिक हुन सक्दैन। हामी यो नबिर्सौं कि सबै नक्षत्रहरू पृथ्वीको विशिष्ट बिन्दुबाट अवलोकन गर्न सकिँदैन, तर यो हामी कहाँ छौँ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। त्यस्तै केहि हुन्छ ध्रुवीय अरोड़ा.
यहाँ हामी तपाईंलाई केही प्रख्यात र सजिलैसँग नक्षत्रहरू देखाउँदैछौं।
यो एक सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण र ज्ञात हो। यो उत्तर मार्क गर्न कार्य गर्दछ। पुरानो नाविकहरूले यसलाई अज्ञात देशहरूतर्फ मार्क गर्न प्रयोग गर्थे।
यो अर्को तारामंडल हो जुन केवल उत्तरी गोलार्धमा मात्र अवलोकन गर्न सकिन्छ। यद्यपि यो प्राचीन समयमा नाविकहरूको लागि ठूलो महत्त्वको थियो किनकि उनीहरूले कुनै पनि प्रकारको क्यालेन्डर प्रयोग नगरीकन बर्षको मौसम र त्यस क्षणलाई थाहा पाउँथे।
यो स्वर्गमा सब भन्दा प्रसिद्ध र सबैभन्दा सुन्दर मानिन्छ। यसलाई सिकारीको नामबाट पनि चिनिन्छ। यसले केही संस्कृतिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र यो मिश्रीहरूका लागि पवित्र छ कि उनीहरूलाई रातको बित्तिकै साथ दिन -
यो आकाश मा पहिचान गर्न को लागी एक सजीलो हो यसको M वा W आकार द्वारा। यो संसारमा सिकाउँदा केहि नक्षत्र पहिचान गर्न प्रयोग गरिन्छ।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीका साथ तपाईं नक्षत्र र उनीहरूको महत्त्वको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » आकाशमा नक्षत्र
जर्मन पोर्टिलो भन्यो
तपाईंको टिप्पणी जोसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद!
Germán Portillo लाई जवाफ दिनुहोस्